Ny COVID-19 iadian’i Pakistan, ny andiam-balala mandravarava ny fambolena · Global Voices teny Malagasy
Ireny no fampitandremana amin'ny mety hisian'ny kere
Voadika ny 28 Mey 2020 5:26 GMT
Valala mpifindramonina. Sary avy amin'i Sergio Boscaino via Flickr. CC BY 2.0.
Tahaka ny firenena maro manerana izao tontolo izao, nahatratra ny toekaren'i Pakistan ny areti-mandringana COVID-19 sady manasongadina ireo olana maro ao anatin'ny hantsana manasaraka ny mahantra sy ny manankarena, ny fifandonam-paritra ary ny fitomboan'ny tsy fananana asa. Ho an'i Pakistan, ireo olana ireo dia mbola mifangaro amin'ny fandalovan'ny andiam-balala maro dia maro mandrava ny voly fihinana hatramin'ny jona 2019 — mandrahona ny fotodrafitrasa efa marefo vokatry ny fiantraikan'ny areti-mandringana.
Lasa matoambaovao iraisampirenena ireo andiam-balalan'ny tanihay rehefa tonga tao Pakistan avy any Iran tamin'ny jona 2019. Araka ny Sampan'ny Firenena Mikambana misahana ny Sakafo sy ny Fambolena (FAO), tena mandravarava tokoa ireo valala ireo satria “andiambalala iray mahatratra velarana mitovy amin'i Paris dia mihinana lanjan-tsakafon'ny atsasaky ny mponina ao Frantsa ao anatin'ny indray andro.”
Tamin'ny Novambra 2019, tonga tao Karachi ny andiam-balala manamarika ny fanafihan'ny valala voalohany indrindra ilay tanàna hatramin'ny taona 1961. Efa noravaravain'ny valala ny landihazo, ny varimbazaha, ny katsaka sy ireo vokatra hafa raha nanambara ny fisian'ny hamehana manerana ny firenena ny governemantan'i Pakistan tamin'ny volana febroary tamin'ity taona ity. Niara-nanapa-kevitra ireo mpiasam-panjakana ambony sy ny minisitra federaly hametraka fiarovana ny voly sy ny mpamboly amin'ny alalan'ny drafi-pirenena (NAP) sy amin'ny tetibola PKR 7,3 miliara (US$ 45,49 tapitrisa).
Araka ny NDMA, nananika distrika miisa 28 ao Balochistan, 11 ao Khyber Pakhtunkhwa, 12 ao Punjab ary 2 tao Sindh ny valala.
Manahy ny amin'ny famahanana ny zanany sy ny voka-pambolena ny tantsaha. Vahoaka maro avy amin'ny faritany no naneho ny ahiahiny amin'ity toe-draharaha mampitaintaina ity ary maro ireo olona no niditra tao amin'ny media sosialy haneho izany tahony izany.
Olana mampanahy ao Pakistan ity fanafihan'ny valala ity ary miforona tsikelikely ny krizy ara-pambolena. Raha heverintsika ho ravaka araka ny itazanantsika azy avy amin'ity tantsaha ity… Ny tena tiany ho tsapantsika dia ny hamafin'ny toe-draharaha amin'izao fotoana.
Vao avy nivezivezy tao amin'ny Twitter ny lahatsary iray an'ny mpitondra fiara niainga avy tao Sibi, Balochistan ho any Sindh any atsimo-atsinanan'i Pakistan nanavatsava andiam-balala.
Nitondra fiara avy any Sibi ho any Sindh manavatsava andiam-balala [nofiratsy] (tamin'ny WhatsApp)
Raha maro ireo matahotra amin'ny tsy ho fahampian'ny sakafo, maro ireo mihazona ny governemanta federaly sy ny departemantan'ny fambolena ho tompon'andraikitra. Mihevitra i Manoj Genani, mpanora-gazety mahaleotena fa niharatsy ny toe-draharaha noho ny tsi-firaharahian'ny governemanta sy ny manampahefana voakasika:
Ao anatin'izao areti-mandringana izao, adinon'ny departemantan'ny fiarovana ny zavamaniry ny valala, efa tokony nandraraka fanafody alohaloha kokoa ry zareo saingy tsy nanao izany hatramin'izao, matahotra ny tantsaha madinika ao Sindh satria mety hiteraka fahaverezam-bokatra be dia be izany.
Ny toekarena ara-pambolen'i Pakistan sy ny fiantraika mandravaravan'ny fielezan'ny valala
Toekarena miankina amin'ny fambolena izay mandray anjara any amin'ny 24%-n'ny fiharian-karena anatiny any ho any i Pakistan. Ampahan'olona maro manan-danja amin'ny mponiny miisa 220 tapitrisa no miankina amin'ny sehatr'asam-pambolena, na mivantana izany amin'ny alalan'ny fiasana eny amin'ny toeram-pambolena sy ny fitarihan-drano na ankolaka amin'ny alalan'ny fanomezana ambioka sy ny toy izany sy ny fanondranana ny vokatra.
— Zuhaib mojai Rajper (@MojaiZuhaib) May 12, 2020
Efa mitsontsorika ny toekaren'i Pakistana noho ny COVID-19 ary ankehitriny dia miatrika fatiantoka goavana ihany koa ny fambolena amin'izao fotoana noho ny valala izay handravarava kokoa any Sindh
Araka ny tatitra fanaraha-maso taona 2018-2019 ny Sosialy sy ny Fandrefesana [Lasitry ny] Fari-Piainana ao Pakistan, efa ho ny 16%-n'ny vahoaka Pakistaney sahady no efa eo ho eo ny fanjarian-tsakafony nefa ho henjana kokoa ny hahazo azy ireo ara-tsakafo.
Manosika ny olona an-tapitrisany ho tratran'ny tsi-fanjariantsakafo, indrindra ireo faritra nampahantraina sy tsy noraharahiana ao Sindh sy Balochistan ny tsy fahombiazan'ny seha-panomezana ambioka sy famokarana ao amin'ny firenena. Ary vao maika niharatsy ny toe-draharaha rehefa nihanaka ny areti-mandringana COVID-19.
Aamer Hayat Bhandara, tantsaha iray ao Punjab atsimo, no nilaza fa nahazo ny rafi-tsakafon'i Pakistan ny tsy fahampian'ny mpiasa tany, ny tsy fahampian'ny fitaterana ary ny tsy fisian'ny tetipanorona mazava avy amin'ny governemanta mandritra ny fihibohana.
Nanoratra momba ny fototry ny krizy ara-tsakafo ao Pakistan ao amin'ny Pakistan left review i Hashim Bin Rashid sy i Mohsin Abdali:
The complete shutdown of agricultural trading markets, especially those that purchase outputs from farmers, has led to significant losses for farmers. With the movement of goods suspended, crops ready for harvest, including grain, have been left to rot in the fields.
Niteraka fatiantoka goavana ho an'ny tantsaha ny fanakatonana tanteraka ny tsenam-pifanakalozana ara-pambolena indrindra fa [ny tsenan'ny tantsaha hoy isika malagasy]. Noho ny fampiatoana ny fivezivezen'ny entana, dia lò eny am-potony ireo vokatra efa vonona otazana (hijinjaina)
Foto-tsakafo ao Pakistan ny varimbazaha sy ny lafarinina, ary maro amin'ireo tokantrano mihamahantra no miankina amin'ireo mba hahazoany ny filàny ara-tsakafo. Tonga tamin'ny vanim-potoam-pijinjana [lohataona] — ka iray amin'izany ny varimbazaha — ny andiam-balala ka niteraka fanahiana mafy dia mafy ho an'ny mponin'i Pakistan.
24%-n'ny mponina ao Pakistan no miaina ao ambany tokonam-baravaran'ny fahantrana izay midika hoe 38%n'ny olona miankina amin'ny varimbazaha sy ny lafarinina. Matahotra ny tantsaha fa ho fatin'ny hanoanana ny zanany ka niangavy ny governemanta handray ny andraikiny, mangataka fiantohana iadiana amin'ny fianahana.
Mampitandrina amin'ny mety hisian'ny kere ny mpitarika ny Antokom-Bahoakan'i Pakistan, antoko mitarika ny fanoherana ao Pakistan rehefa tsy mandray andraikitra ara-potoana ny governemanta federaly.
Manafaingana ny fiaraha-miasa eo amin'ny mpiray faritra ny valala
Manimba ny toekarena ara-pambolena [any amin'ny firenenkafa] ihany koa ity famelezan'ny valala ity, ka mitolona mafy amin'ny fiadiana azy ity ny firenena maro aty Afrika. Niteraka fiaraha-miasa eo amin'ny sehatry ny mpiray faritra kosa ity krizy ity ao Azia, ka maro ireo firenena mifanolotra sisintany amin'i Pakistan no manolotra ny fiarahany miasa hiadiana amin'ity zava-doza ity.
Tamin'ny volana febroary, na dia “ratsy” aza ny fifandraisana amin'i India noho ny fifanandrinana ao Kashmir, dia voalaza fa noheverina ho nanafatra famonoam-bibikely tamin'io mpiray sisintany aminy io i Pakistan. Tamin'ny ankamaroan'ny vaovao vao haingana, efa nitady fanampiana avy ao Pakistan sy Iran nanolotra fiaraha-miombon'antoka eo amin'ireo firenena telo ihany koa i India.
Nanitatra ny fanohanany feno an'i Pakistan i Shina tamin'ny alalan'ny fandefasana 300 taonina famonoam-balala sy tamin'ny fandefasana fiara mpanao famendrahana miisa 350 tao anatin'ny telo volana farany. Efa nanolotra ny fahaiza-manaony ho an'i Pakistan ihany koa i Iran sy i Torkia.
Ny Ambasadaoron'i Iran ao Pakistan, Syed Mohammad Ali Hussaini, no nandrisika an'i Pakistan sy India hiasa miaraka amin'i Iran hiady amin'ny fahavalo iraisana. Mihevitra izy fa ny fifampizarana fahalalàna, fahaiza-manao manokana ary ny fomba fihetsika tsara indrindra no hanampy ny firenena telo tonta hamongotra ny fielezan'ny valala sy hametraka fiarovana ny fotodrafitrasan-tsakafo efa marefo.